Ngokuhambisana nezidingo zokuphepha umlilo laying yikuphi ukuxhumana kufanele kube kwakhiwa ikhebula penetrations - imikhiqizo, ukwakhiwa prefabricated, okuyinto zenzelwe ukudlula izintambo, amapayipi kawoyela, zokuxhumana imigqa ngokusebenzisa izindonga ngodonga. injongo yabo eyinhloko - ukuvimbela ukusabalala ngomlilo amagumbi eduze ngoba izinto ezingase zibambe umlilo. Ziqhutshwa ngesisekelo the ubambisane 2.13130.2009 futhi GOST R 53310-2009. ukufakwa wabo saziso futhi kulawulwa umthetho kahulumeni.
Fire linezingxenye futhi ikhebula penetrations
Ngokusho izidingo zokuphepha umlilo ekwakhiweni kwezakhiwo zokuhlala kwezakhiwo eziningi, zihlukaniswe umlilo linezingxenye ukuthi uvimbele insimu yayo umlilo, nomusi, ningamniki ukusakaza ngale kuleli gumbi engangikulo. Nokho kunoma iyiphi ubunjiniyela imigqa Igumbi ihlolwe ezephula ubuqotho kwesigaba umlilo uphawu. Ukuze ugcine imingcele umlilo futhi izakhiwo ukukhwezwa ikhebula penetrations.
Isibonelo esimangalisayo okuyinto efakazela isidingo ukufakwa izakhiwo ezinjalo ungumlilo ku Ostankino umbhoshongo ngonyaka ka-2000. Lapha ezokuxhumana imigqa zafakwa kushaft mpo, akuyona compartmentalized emlilweni linezingxenye bese kubekwa of maqembu zokuzivikela. Ngenxa yalokho, umlilo yasheshe kulo lonke isakhiwo.
Umklamo ikhebula penetrations
Indlela elula kuyinto emikhonweni metal ikhebula Ukungena ezishumekwe udonga noma ukwahlukanisa. Isikhwama sidlula ikhebula, komsele, le ububanzi elingaphandle okuyinto kancane lincane ububanzi umlilo design. Igebe phakathi zokuxhumana umugqa futhi odongeni engaphakathi liner egcwele uzi lwefilakisi elingabhuliwe, kahle ukuba afuthwe ngesibulali amafutha. Yingakho elula ikhebula penetrations ubizwa nangokuthi nezindlala. Futhi, esikhundleni noma kanye donsa lingasetshenziswa asbestos, izindandatho enjoloba, emasakeni ekhethekile.
Ngezinye zezimboni izakhiwo kanye izitshalo amandla aphethwe nezinye imiklamo eziningana. Zimelele ezimbili emapheshana metal, imikhawulo ezixhunywe sleeves. Nokunamathelisa igebe phakathi kwezokuxhumana kanye kwezindonga engaphakathi beso nokusebenzisa washers ekhethekile. Omunye ikhebula Ukungena ezinjalo isetshenziswa ukweqa imigqa embalwa engineering.
Izinto ngoba uphawu
Ukwakha kungenzeka ebeka i extra noma esikhundleni the line endala ubunjiniyela zonke izintambo, izintambo nokunye ukuxhumana idlule izindonga emabhokisini noma ezilahliwe zensimbi amashubhu (imikhono). Ngakho-ke, ukubekwa uphawu ikhebula penetrations kumele yazalwa refractory, amanzi- negesi-Friend impahla isuswe kalula.
Kulokhu, ikhono simelane umlilo ekunqanyulweni akumelwe libe lincane uma kuqhathaniswa nomthamo izindonga refractory.
I SNP 3.05.06-85 abonisa ingxube athize ovunyelwe ukugcwalisa igebe phakathi ikhebula kanye kucwila:
usimende-isihlabathi ingxube isilinganiso 1:10;
Ukwakheka ngobumba isihlabathi izinto isilinganiso 1: 3;
uphawu isisindo ubumba, isihlabathi usimende (1.5: 11: 1);
usimende, Perlite zandiswa ethathwe isilinganiso 2: 1;
ezinye izinto ezihlangabezana nezidingo zokuphepha umlilo.
Plaka Ukungena ikhebula uvumelekile ukwakhiwa Foam, uma eqinisekisiwe ngokuhambisana nezidingo GOST R 53310-2009. Izikhala ezindongeni kungaba ukungabi nalutho uma izindonga kungukuthi nomlilo izithiyo.
Ngo umkhakha lanamuhla ukwakhiwa for ukwahlukanisa komlilo linezingxenye esetshenziswa Ukungena Modular. Zimelela lensimbi noma ifreyimu plastic, okuyinto anemisila ifaka izimpumputhe noma amamojuli nge izimbobo. Ekuvikeleni kagesi isethi emisebeni ye gaskets zethusi. Yobunzima is ukungezwani imishudo.
Ngokuvamile, Modular ikhebula penetrations umlilo kukhona ukwakhiwa kuyinkimbinkimbi behlangene esizeni kusuka prefabricated ukubekwa uphawu ifaka ka polymer kanzima amenable ukuba amandla omlilo. Njengoba zokubopha esetshenziswa izakhi ezenziwe ngensimbi lashukumisa engagqwali.
Ngo ikhebuli yobuleza enjalo kuyavumelana uphawu module okhethekile futhi yobunzima sithuthukiswe crimped adaptha. Ubendle nezikulufi screwing uphawu faka ziya onomfutho ikhebula uvalwe crimped futhi unikeze igesi kanye ukumelana namanzi Ukungena.
Izici ukufakwa ikhebula penetrations
Ukukhweza penetrations has izici zayo siqu, okuyinto incike isakhiwo impahla asekelayo. Ngakho, ebeka zethelevishini ezikhokhelwayo e Monolithic izakhiwo eziphakeme zikakhonkolo, umlilo cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi ezakhiwe abekwa ngqo ku formwork ngaphambi bathele mix ukhonkolo. Ngo ukwakhiwa prefabricated uhlobo Monolithic sokungena emabhulokini abekwa efektri ngesikhathi enza.
Ngo izindlu titini ukwakhiwa kweziteshi zethelevishini ezikhokhelwayo ezibekwe Amapayipi ekhethekile - Stroebe. Esikhathini ngomumo Monolithic izakhiwo idayimane sokuprakthiza sokuprakthiza izimbobo ezincane. Ngakho-ke, ububanzi Ukungena ibalwa ngokwehlukile. Ngenkathi kwakhiwa noma umsebenzi Ukungena yesikhashana yalesi sakhiwo zakhiwe ekhethekile umlilo cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi imicamelo.
Test ikhebula penetrations
Kuye lapho ezisebenza ikhebula penetrations kumelwe bahlangabezane nezimfuneko. Ngakho, lapho babeka phezu enuzi izitshalo amandla kumele ihlolwe ukuze ikhono lokwamukela, ukuhlukanisa noma kubonise ngemisebe.
On ezivamile zokwakha Universal Ikhebula Ukungena lihlolwe ukushisa, amandla isenzo (ikakhulu e eguqa ukumelana), kanye umlilo, amanzi kanye negesi-isithiyo izakhiwo.
Ipulazi le-Starozhilovsky ipulazi: ikheli, ucingo